Ọnụnọ Goldfinch | Igbu egbugbu
Sergio Gallego | | Attdị Anụmanụ
Nnụnụ ma ọ bụ nnụnụ aghọwo ihe a ma ama na-ewu ewu n'ihe gbasara igbu egbugbu n'afọ ndị na-adịbeghị anya.. Ha na-adịkarị na mpaghara ụmụ nwanyị karịa ụmụ nwoke. Nnụnụ na-egosipụtakarị ọchịchọ na ọchịchọ nke inwere onwe ha oge niile ma si otú ahụ mebie njikọ niile. Ndị a bụ ihe ngosi mara mma ma dị mma nke ukwuu nke mere na ha zuru oke ijide n'akụkụ ahụ mmadụ nwere ike igosipụta.
Goldfinches bụ otu n'ime nnụnụ kachasị egbu egbu ma ọ bụ nnụnụ yana ndị ọzọ dị ka ikwiikwii, crows ma ọ bụ ilo. N'isiokwu na-esonụ anyị na-enye gị ụfọdụ echiche banyere akara aka goldfinch iji nyere gị aka ikpebi.
1 Pụtara nke goldfinch tattoos
2 Ogbugbu Goldfinch
Pụtara nke goldfinch tattoos
Na mbu, egbugbu n’elu nnụnụ na-anọchi anya nnwere onwe na ịhụnanya maka okike. Site n'ebe ahụ, ụdị ọ bụla ma ọ bụ ụdị nnụnụ ma ọ bụ nnụnụ ọ bụla nwere otu ihe ha pụtara. E nwere nnụnụ ndị dị ka nnụnụ na-ekwu banyere ọnwụ. Agbanyeghị, n'ihe banyere goldfinches, ihe ọ pụtara dị iche ebe ọ bụ na, ịbụ abụ na-enweghị nnwere onwe, ha jikọtara ya na ọ joyụ, ọ happinessụ na mbata nke oge opupu ihe ubi. Ọ bụrụ na ị na-ewere onwe gị dị ka onye nwere obi ụtọ yana onye dị mma na onye nwere obi ụtọ, ịmịcha ọla edo nwere ike bụrụ ihe zuru oke maka gị.
Mgbe a bịara n'inweta egbugbu goldfinch ị nwere ike ịhọrọ atụmatụ dị mma nke ekwuru nnụnụ u họrọ maka oyiyi dịtụ freer ma dị iche. Goldfinch bụ nnụnụ na-adọta uche n'ihi agba ya dị ka ọbara ọbara dị n'isi ya na edo edo nke a na-ahụ n'akụkụ nke nku ya. N'ihe banyere egbugbu, nke a ga - enyere gị aka inwe ike iji agba ndị a ma nweta atụmatụ mara mma nke ukwuu.
Onwere ndi ozo choro ichoro nke ozo, ihe di iche na nke ohuru nke goldfinch. Na nke a ị nwere ike ịhọrọ iji agba ma ọ bụ see akara ojii nke na-ese onyinyo nnụnụ dị otú ahụ.
Banyere ebe kachasị mma nke ahụ iji egbugbu a goldfinch, ọtụtụ mmadụ na-ahọrọ igbe, ubu, na ọbụna akụkụ. Ihe niile ga-adabere na ya ma ọ bụ nnukwu egbugbu ma ọ bụrụ na nke ọzọ dị obere. Ihe dị mkpa bụ ịhọrọ nhazi dị mma ma mee egbugbu ahụ iji gosipụta ihe ọ chọrọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Igbu egbugbu » Ofdị egbugbu » Attdị Anụmanụ » Ogbugbu Goldfinch
Mkpa tragus, àgwà a ịkpọpu akụkụ
Galician Celtic akara, chọpụta ihe ha pụtara maka egbugbu